YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 04
အမှတ်(၉၇/ခ)၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ရက်စွဲ - ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပမည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံအတွက် တက်ရောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များအား စိစစ်ရေး အတွက် အောက်ပါစိစစ်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။
၁။	ဦးသန်းထွန်း (သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်)	ဥက္ကဌ
၂။ ဦးလှဖေ (သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်)	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးသန်းဦး (ရုံးအဖွဲ့)	အဖွဲ့ဝင်
၄။	ဦးမြင့်ဌေး (လူငယ်ညီလာခံကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့) အဖွဲ့ဝင်
၅။	ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် (ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်) အဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်ခင်သန်းလှ (ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)	အဖွဲ့ဝင်
၇။	ဦးစိုးဝင်း (ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)	အတွင်းရေးမှူး
၂၅-၂-၂၀၁၃ ရက်တွင် ကျင်းပသော ညီလာခံကျင်းပရေးဗဟိုကော်မရှင် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/04/20130အကြံပြုခြင်း
ဘာသာရေး တင်းမာမှုကြောင့် လှိုင်သာယာမှာ ဒေသန္တရ အမိန့်ထုတ်ပြန်
3 မတ်လ 2013 - 15:56 GMT
လှိုင်သာယာ အမှတ်၁နဲ့ ၃ရပ်ကွက်တို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာ ဝင်တို့ကြား ပြဿနာ ဖြစ်ရာကနေ တင်းမာပြီး မွတ်ဆလင် အိမ်တွေကို ခဲပေါက်မှုတွေ ဖြစ်လို့ မတ်လ ၂ရက်နေ့က မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေ အများပြည်သူ ဥပဒေနဲ့အညီ နေကြဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါ လုံခြုရေး ချထားပြီး ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုတွေ မရှိအောင် အသံချဲ့စက်နဲ့ အသိပေးတာတွေ ထိန်းသိမ်းတာတွေ လုပ်နေကြောင်း မြို့နယ် ထွေအုပ်ဌာနမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထိန်စိုးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ပြဿနာ စဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတခုက ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားခွေကို လူမြင်ကွင်းမှာ မွတ်ဆလင် အမျိုးသမီးတဦးက ချနင်းရာကနေ ကန့်ကွက်မှုတွေ ဖြစ်လာပြီး အဲဒီမိသားစုလည်း ရပ်ကွက်ကနေထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် သွားရတယ်လို့ ရပ်ကွက်နေသူတဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ အဲဒီလို ပြုမူဆောင်ရွက်သူကို သာသနာ ညစ်နွမ်းအောင်လုပ်မှုနဲ့ တရားစွဲထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။မွတ်ဆလင် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း သူတို့ ဘာသာဝင်တွေကို ဥပဒေအရ အကာအအကွယ် ပေးဖို့ ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရကို တောင်းဆိုထားတယ်လို့ ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ဘာသာရေး အရတင်းမာမှုတွေဟာမြို့နယ်အချို့မှာ ဖြစ်ပွားရာကနေ အခုအခါ အေးငြိမ်းသွားပေမယ့် တဖက်နဲ့တဖက် လှုံ့ဆော်မှုတွေတော့ ဆက်ရှိနေတယ်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
၂၈။၂။၂၀၁၃ မှာ ကညန မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကား၂ စီး ပြသာနာလေးပါ။
သိရသလောက်ကတော့... ကားနံပတ်က တစ်စီးကို ၁စုံ ပဲ ထုတ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ပြီးများ ၂စီးအတွက် ၂စုံ ကို နံပတ်တူ ထုတ်လိုက်လဲ မသိဘူး။
2စီးလုံး ကို စစ်ကြည့်တော့လည်း စာရွက် စာတမ်း အားလုံးစုံ ကြတယ်။
Management ပိုင်းပဲ လျော့နေတာလား။ production အပိုင်းပဲ လျော့နေတာလား။
department အချိတ်အဆက် လွဲ နေတာလား။
ဒီတနေ့ရဲ့ ထူးဆန်းထွေလား ပြည် မြန်မာ တခွင် က ကညနမှာ တွေ့ ခဲ့ တဲ့ Identical twins ကားလေးပါ။
Copy from : Cherry Yoma Co.,LTD's photo.
ကြေးနီစီမံကိန်း ဒေသခံတချို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တရားစွဲဖို့ ကြိုးပမ်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပန်းတောင်းတောင်ဒေသ ဒေသခံတချို့ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တရားစွဲဖို့ မတ်လ ၄ ရက် ဒီကနေ့ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့က လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ သပိတ်စခန်းတွေကို အစိုးရက အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ရာမှာ သံဃာတွေနဲ့ ဒေသခံအတော်များများ မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြိုခွင်းမှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ ဒေသခံတွေက တောင်းဆိုနေရာမှာ ဖော်ထုတ်အရေးယူဖြေရှင်းမှု မပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တရားစွဲဖို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ ရန်ကုန် ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကိုသောင်းထိုက်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တရားစွဲဖို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားရာမှာ လက်ပန်းတောင်းတောင် ဒေသခံတွေ ကိုယ်စား ဆည်တဲကျေးရွာက မရီဝင်း၊ မ၀င်းဝင်းဌေးနဲ့ အလယ်ရွာက ကိုဇော်နိုင်တို့က ဦးတိုက်လျှောက်ထား တရားစွဲဆိုတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံး တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေက တရားစွဲဆိုဖို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားလွှာကို လက်ခံထားလိုက်ပြီး တရားစွဲဆိုမှုကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေကို တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တရားစွဲဆိုဖို့အတွက် တရားရုံးအနေနဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ သင့်မသင့်ကို မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အကြောင်းပြန်မယ်လို့ ပြောကြောင်းသိရပါတယ်။
မစ္စတာTurnell နှင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်တို့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က မြန် မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ မစ္စတာTurnell က ၁၀ ကြိမ် အထိလာရောက် ခဲ့ဖူးသည် ဟု သိရကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ Reform များကို ဝေဖန်သုံးသပ် အကြံဥာဏ်များ ပေးနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဲာပိုန် မတ်လ (၄) ရက်နေ့၊ ရွှေဟသာင်္သတင်းဌာန
“အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့ သူတို့က ဒီဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်း ကျေးရွာ အုပ်စုမှာ ရှိတဲ့ မောရှမ်း၊ ကံစီ၊ မိုဇာကြီး ကျေးရွာတွေကို ကျေးရွာ လုံခြုံရေး ယူပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ ညပိုင်းမှာ ကင်းစောင့်ပေးတယ် နေ့ခင်းပိုင်းဆိုရင် ရွာထဲမှာရှိတဲ့ အကောင်းစား အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေ လိုက်သိမ်းတယ်ပြီးတော့ တခြား တနေရာကို ကားနဲ့ သယ်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ပစ္စည်းတွေကို ရောင်း စား လိုက်ကြတယ်။ သူတို့က စိတ်ထင်တိုင်း ကျဲနေတော့ ရွာသားတွေက ဘာမှ မပြောရဲကြဘူး။ ရွာထဲက ပြန်ရောင်စား လို့ရတဲ့ ပစ္စည်း မှန်သမျှ အားလုံးကို သယ်သွားခဲ့ကြတယ်လို့” ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့် ဇန္နာဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့တွင်လည်း ယင်းအစိုးရ စစ်တပ်များသည် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေး ရွာ အုပ်စုရှိ ဒေသခံ များ၏ နေအိမ်များအား ဖျက်ဆီး၍ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်စိမ်းများအား လုယူခဲ့ကြရာ မခံမရပ်နိုင်ကြသော ဒေ သခံ တချို့က ပြန်လှန်ငြင်းဆိုမှုများ ဖြစ်ရာက သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟု မျက်မြင် ရွာသားများက ဆိုပါသည်။
စကခ (၇) ၏ ဖေဖေါ်ဝါရီလ စစ်ဆင်ရေး အတွင်း လုံးခင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆန်ခါကျေးရွာသားများ အယောက် (၄၀)ခန့် သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရကြောင်း KIA ဖက်မှ ဆိုပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်မှူး စိုင်းခမ်းလိတ်ဝင်း ဦးစီးသော ခမရ ၄၃၇ တပ်ဖွဲ့မှ သတ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။ ထို့ပြင် မသင်ကာမှုကို အကြောင်းပြုပြီး ကျေးရွာ လူထုများကို တစ်အိမ်တက်ဆင်း လိုက်လံ ရှာဖွေခြင်း၊ စခန်းကုန်းသို့ ဖမ်းဆီးထားပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ ချုပ်နှောင်မှုကို ခံခဲ့ရပါသည်။
ထိုဒေသ၌ လှုပ်ရှားနေသော အစိုးရ တပ်များမှာ ကယားပြည်နယ်၊ ဖယ်ခုံ အခြေစိုက် အမှတ်(၇) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (စကခ) လက်အောက်ခံ ခမရ ၄၂၄၊ ခမရ ၄၂၅၊ ခမရ ၃၃၆၊ ခမရ ၄၂၇ နှင့် ခလရ ၁၀၂ တပ်ရင်းတို့ လှုပ်ရှားလျှက် ရှိ ကြောင်း ကံစီဒေသမှ KIA တပ်ရင်း(၆)မှုး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အင်ခွန်ဇော်ဒွဲက ပြောပါသည်။
အဆိုပါ စကခ (၇) တပ်ဖွဲ့များသည် ပြီးခဲ့သည့် ဇန္နာဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့၌ ကံစီ ဒေသဖြစ်သော KIA တပ်မဟာ (၁)၊ တပ်ရင်း (၆) ကံစီ စခန်းများကို စစ်အင်အား (၄၀၀) ခန့်ဖြင့် စစ်ကြောင်း (၃) ကြောင်း ခွဲကာ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဤသို့ကြောင့် ဇန္နာဝါရီလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် တို့သည် ထိုကံစီ စခန်းမှ ဆုတ်ခွာ ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အစိုးရ သတင်းစာ များကမူ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း၌ ရွာသား နေအိမ်များကို KIA တပ်ဖွဲ့မှ လုယက် မီးရှို့ ဖျက်ဆီး နေမှုများ ပြု လုပ်ခဲ့သည်ဟု ရေးသား ခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အစိုးရသတင်းစာမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီမှ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက အဆိုပါ လုပ်ရပ်သည် KIA တပ်ဖွဲ့များ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရ တပ်များကသာ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဇန္နာဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့၌ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
“ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ KIA တွေက ရှောင်ပေးထားတယ်။ အစိုးရ စစ်တပ်တွေက နေရာယူထားတယ်။ သော့ခတ်ထားတဲ့ အိမ်တွေကို ဖောက်ပြီး ပစ္စည်းတွေ ယူတယ်။ ရွှေတွေ ယူတယ်။ ဖားကန့် တမြို့လုံး လိုလို လုပ်နေတယ်။ တချို့အိမ် ဆိုရင် မီးရှို့ခဲ့တယ်။ ကုမ္ပဏီ တချို့မှာ ဆိုရင်လည်း ကျောက်စိမ်းတွေ သူတို့ လိုချင်တာတွေ ယူပြီး မီးရှို့ထားတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါက စစ်တပ်က လုပ်တာပါ။ အဲဒါက KIA က ရှို့ပါတယ် ဆိုပြီး သတင်းစာတွေမှာ ပါတာ တွေ့ရလို့” ဟု ပြောပါသည်။
စကခ(၇) လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ဇန္နာဝါရီလယ်မှ စပြီး ကံစီ၊ လုံခင်းရှိ ဒေသခံများသည် ကျောက်သိမ်း မှော်တွင်းမှ မောင်းထုတ် ခံရခြင်း၊ ကျောက်စိမ်း အပါဝင် အခြား ပစ္စည်းများ၊ အသိမ်းခံရခြင်း၊ မသင်ကာမှုကြောင့် အသတ်ခံရခြင်း၊ ကျေးရွာ တွင်းသို့ လက်နက်ကြီးများ ပစ်သွင်းပြီး မောင်းထုတ် ခံရခြင်း၊ ရှောင်တိမ်း နေရခြင်းကြောင့် ရိက္ခာ ပြတ်လတ်ခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးများ ၀င်ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းများ ခံခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း KIA ရှိရာသို့ အစိုးရတပ်များ အင်အားဆက်တိုက်တိုးချဲ့လာသောကြောင့် တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်
ယနေ့ညနေ ၅ နာရီခွဲချိန်တွင် နမ်ခမ်း (Nam Hkam) ဘက်မှ အစိုးရစစ်တပ် ကား ၁၆ စင်းသည် မူဆယ် (Muse) သို့ရောက်ရှိလာပြီး အင်အား ၄၀ ကျော်နှင့် မြင်း ၅ ကောင် တင်လာကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
“အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ဟုတ်တယ်။ တစ်ဖွဲ့က လူတွေနဲ့ မြင်းတွေနဲ့ ၉ နာရီလောက်မှာ ရောက်လာတယ် .. ပြီးတော့ တစ်ဖွဲ့က ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ လူအင်အားပဲ ၁၀၀ လောက်နဲ့ ရောက်လာ တယ်… ခြေလျင်နဲ့ဟုတ်တယ်။” ဟုပြောသည်။
ထို့အတူ KIA ပြည်သူ့စစ် MHH တပ်ခွဲ (၅) နယ်မြေတွင်လည်း အစိုးရအင်အား ၃၀ ကျော်သည် ကောင်းဂွင် (Kawng Gwi) စခန်းသို့ တိုးချလာကြောင်း တပ်ခွဲ(၅)မှ KIA အရာရှိတစ်ဦးပြောသည်။
“စစ်အင်အားက ဆုတ်တာမရှိဘူး နေ့တိုင်းလို နည်းနည်းစီပို့နေတာ။ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပို့ပြီး တစ်နေ့မှာ ၁၀ ယောက်လောက်ပို့နေကြတယ်။ နေရာတိုင်းပဲ …ဒီနေ့လည်း MHH တပ်က လူငယ်ကို ပန်ဆိုင်းရွာ အထွက် အစိုးရတပ်က သေနတ်နဲ့ထောက်ပြီး ကောင်းဂွင်စခန်းဖက်ကို ပို့ခိုင်းတယ်။ ၄ ယောက်ကို ၂ ကြိမ်ပို့ပေးခဲ့တယ်တဲ့” ဟု MHH အရာရှိပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရသည်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) ကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုများ လျှော့သွားရန် ဆောင်ရွက်နေချိန် တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ထိုကဲ့သို့တပ်ပေါင်းစုများ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော် တိုးချလာပြီး ဆက်လက်၍ အင်အား တိုးချနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် မကြာမီနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အရာရှိများပြောဆိုသည်။
ဦးခင်ရွှေကို ဦးနေမျိုးဝေတရားစွဲ မင်္ဂလာဒုံတရားရုံးက လက်မခံ
ဦးခင်ရွှေအနေနဲ့ ဂျာနယ်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ စည်းလွတ်ဘောင်လွတ် ပြောထားတဲ့ကိစ္စအတွက် အသရေထိခိုက်မှုဖြင့် မင်္ဂလာုံတရားရုံးမှာ တရားစွဲတဲ့အခါ တရားသူကြီးက လက်မခံခဲ့ပါဘူး လက်မခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့
အခင်းဖြစ်စဉ်ကို ပြောဆိုတဲ့ နေရာ ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရရုံး စိုက်ရာ မြို့နယ် ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးမှာ စွဲဆိုသင့်ကြောင်းပြောဆိုလာပါတယ် ။
အဲဒါကြောင့် ဒဂုံမြိုကနယ် တရားရုံးကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့အခါ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ တရားရုံးက တရားစွဲတာကို လက်မခံကြောင်း မနက်ဖြန်မှ ပြန်လာခဲ့ပါ တရားစွဲဆိုတဲ့အချိန်ပိတ်ထားပြီလို့ ဆိုပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် မေးကြည့်တာပါ - တောခိုတာနဲ့ တရားစွဲတာ ဘယ်ဟာလွယ်သလည်း။
(တရားသူကြီးမင်း ===အကိုရေ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာ အရပ်မှာဘဲစွဲဆိုခွင့်ရှိပါတယ် နေ့လယ်တစ်နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးလည်း အမှုသစ်လက်ခံလေ့ရှိပါတယ် နေ့တစ်နာရီကျော်သွားမှဆိုရင် ခြွင်းချက်နဲ့ဘဲ လက်ခံလေ့ရှိပါတယ် သာမာန်အားဖြင့်တော့ လက်မခံတော့ပါ ဒီစနစ်ကလည်း တနိုင်ငံလုံးမှာကျင့်သုံးတာဖြစ်ပီး ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက ကျင့်သုံးခဲ့တာပါ ရဲတွေကအစ လိုက်နာရတယါ)
လက်ပွတ္တာ ၉၆၉ တရားပွဲအားဦးစီးကျင်းပသူ လူငယ်ခေါင်ဆောင် သုံးဦးအား ဟာဂျီ လှတင်.မှ တရားစွဲ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလပွတ္တာမြို့မှာ ၉၆၉ တရားပွဲများကို ဦးစီးကျင်းပတဲ့
လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၃ ဦးကို လပွတ္တာ မွတ်စလင်များအဖွဲ့မှ ဟာဂျီလှတင်
ဆိုသူက ဧရာဝတီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်အထိ ဘာသာရေးစော်ကားမှုများဖြင့်
တိုင်တန်းလိုက်ပါတယ်..အဲဒီအတွက် လပွတ္တာ ရဲစခန်းမှ ၉၆၉ အဖွဲ့မှ
လူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုဇော်တိုး ကိုမြတ်တိုး နဲ့ ကိုသိန်းတိုး တို့ကို
ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာမှာ တိုင်ကြားသူ ဟာဂျီ ဦးလှတင်ဟာ ၉၆၉ အဖွဲ့က
မဖြန့်ဝေတဲ့စာရွက် စာတမ်း များဖန်တီးပီး လုပ်ကြံတိုင်တန်းတာ
ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် ၉၆၉ အဖွဲ့မှကိုဇော်တိုးက ဟာဂျီလှတင်ကို လပွတ္တာ တရားရုံးမှာ
တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်..ထိုသို့တရားစွဲဆိုသောအခါမှ ဟာဂျီလှတင် က
ကျေအေးပေးပါရန် ပြောကြားသဖြင့် ကျေအေးပေးပါရန် လပွတ္တာ မြို့ ၄
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးတိုးတိုး မှ မြို့နယ်
အတွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးတွင်ခေါ်ယူ ညှိနိုင်း ခဲ့ရာမှာ..တရားစွဲဆိုသူ
ကိုဇော်တိုးမှ မိမိသည် ဦးလှတင်ကို ရန်ညိုးရန်စဖြင့်
တရားစွဲဆိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်း မိမိတို့အမျိူး ဘာသာ သာသနာ
ထိုကြောင့် တရားမှု ဆောင်ရွက်နေသည်ကို မတရား လိမ်လည်
လှည့်ဖျားဆောင်ရွက်လျင် ဥပဒေက မျက်ကွယ်မပြုသည်ကို သိရှိစေရန်
တရားစွဲဆိုပါကြောင်းပြောကြားပြီး အောက်ပါ အချက်များကို
၁။ ဦးလှတင်မှ မှားယွင်းကြောင်းနှင့်နောက်နောင် ဤသို့ မပြုလုပ်ပါရန် ခံဝန်
ကို တရားရုံး၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်
၂။ ယခု ကုန်ကျထားသောတရားစရိတ်များ ပြန်လည်ပေးရန်
သို့သော် ဦးတိုးတိုးမှ ကုန်ကျစရိတ်မပေးနိုင်ကြောင်း(စစ်လဲရှုံးရ
စစ်လျော်ကြေးလဲ ပေးရ မလုပ်နိုင်ပါ ဟု ဆိုသည်)
ခံဝန်ကတိကိုလဲ ၄င်း၏ လဘက်ရည်ဆိုင် တွင်သာ ထိုးနိင်မည်ဟု
တာဝန်ခံပြောသောစကား) ညှိနိုင်းမှု မပြေလည်ပဲ ၉၆၉ အဖွဲ့နာယက
ဆရာတော်များထံ တင်ပြရာ ဥပဒေ အတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါဟု
မိန့်ကြားသဖြင့် ..တရားဆက်လက်စွဲဆိုထားကြောင်း သိရပါတယ်...
(ရုံးချိန်းကို ၇ ရက် ၃ လ ၂၀၁၃ သို့ ချိန်းဆိုလိုက်ကြောင်း နှင့်
ဟာဂျီ လှတင်ဘက်မှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးတိုးတိုးမှ တာဝန်ယူ လိုက်ပါ ပြောဆိုပေးနေကြောင်း နောက်ဆက်တွဲ သတင်းရရှိပါတယ်)
၉၆၉ လူငယ်များ ဦးဆောင်ကျင်းပသော လက်ပွတ္တာ တရားပွဲ ပုံ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/04/20134အကြံပြုခြင်း
ဂျော်ဒန် နိုင်ငံရောက် အလုပ်သမားများအားကူညီဖြေရှင်းပေးရန်ဆွေးနွေး
Zaw Min Baung Baung's photo.
ဂျော်ဒန် နိုင်ငံတွင်လတ်တလော ဒုက္ခရောက်နေသော အလုပ်သမားများအားကူညီဖြေရှင်းပေးရန် မိသားစုဝင်များ၊ ရှေ့နေများနှင့် ၈၈မျိုးဆက် ရုံးမှ အလုပ်သမားရေးရာတာဝန်ရှိသူများဆွေးနွေးနေစဉ်
လက်ပန်းတောင်းတောင်အရေး တွေ့ရှိချက်တွေကိုသာ တင်ပြသွားမည်
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် အကြံပြုတင်ပြသွားမှာမဟုတ်ပဲ အဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုသာ ပြည်သူတွေသိရှိအောင် တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ မတ်လ ၄ ရက် ဒီကနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ခေတ္တရပ်နားစဉ်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ပြောပါတယ်။
မကြာခင်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ ထွက်တော့မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲလို့ သတင်းထောက်တွေက မေးမြန်းရာမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က
“ကျမတို့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ရပ်ဖို့လဲမပြောဘူး၊ မရပ်ဖို့လည်းမပြောဘူး၊ ကျမတို့က အမှားအမှန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျမတို့က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကို ပြည်သူတွေရော အားလုံးကိုသိအောင် တင်ပြပေးမှာပါ၊ အဲအတွက်ကြောင့်မို့ ရပ်မရပ်ဆိုတာကို ကျမတို့လုံးဝမပြောဘူး၊ ကျမတို့တွေ့ရှိချက်ကို ပြောမှာပါ၊ ကျမတို့တင်ပြတာကို အမှားအမှန် ခွဲခြားတာ၊ ဆုံးဖြတ်တာအားလုံးဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ တာဝန်ရှိသူအားလုံးက ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်၊ ကျမတို့က စုံစမ်းပေးရတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်”
အစီရင်ခံစာကိုတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဥရောပခရီးစဉ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်ရင် တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီး အလားတူပြည်သူတွေသိအောင်လည်း ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့က သမ္မတကြီးဆီ တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ တင်ပြီးပြီဆိုတော့မှ ပြည်သူတွေအားလုံးကို ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာပါ၊ ပြည်သူတွေအားလုံး ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေတခုလည်းပါမယ်လို့ ကျမတို့ယူဆပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဥက္ကဌကြီးကိုယ်တိုင် ပြောပြီးသားပဲ”
လက်ပန်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသပိတ်စခန်းတွေကိုအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့မှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ကော်မရှင်က ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ မလက်တိုကျေးရွာမှာ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို မတ်လ ၄ ရက် ဒီကနေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က RFA ကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့ကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခွန်ဝန်ကြီး ဦးဝင်းကိုကိုက ဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဘဏ္ဍာအခွန် ၀န်ကြီးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဖွဲ့တုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျ၊ ကျနော်တို့ ပြန်လည်တိုင်ပင်ခြင်း ဘာညာပြောဖို့အတွက် အချက်အလက် ကျနော့်မှာ ဘာမှမရှိပါသေးဘူးခင်ဗျ၊ ကျနော်ရည်ရွယ်ထားတာက စစ်ဆေးစုံစမ်းပြီးတော့ ရသမျှအားလုံးကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်”
ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ဒေသခံတွေကိုလည်းပါဝင်စေမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာဒေသတွေကို ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မယ့်အပေါ် အဲဒီကော်မရှင်နဲ့ ဒေသခံလယ်သမားတွေ တွေ့ဆုံပြီးမှသာ သိနိုင်မယ်လို့ ဒေသခံလယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးလှမြင့်က ပြောပါတယ်။
"တဖက်က တောင်သူလယ်သမား အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ဦးစီးဦးဆောင် ဆောင်ရွက်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ခုနက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်နဲ့ ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှသာ အဖြေနည်းနည်းချင်း ရလာမှာပါ"
လွန်ခဲ့တဲ့၂၀၀၄ခုနှစ်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုက အဒိပ်၊ ပလောင်၊ ဇီးကုံး၊ ကုံဒိုင်းလေး စတဲ့ ကျေးရွာတွေက လယ်ဧက ၅၅၀ကျော်ကို ဒေါက်တာမြင့်စိန်ပိုင် ငါးမွေးမြုရေးကုမ္မဏီဖြစ်တဲ့ အောချက်ဒ်ကုမ္ပဏီက သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီလယ်ယာမြေတွေမှာ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရဖို့ လယ်သမားတွေက တောင်းဆိုခဲ့ရာကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ရက်နေ့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတြွေုဖစ်ခဲ့ကြရာမှာ ရဲတပ်သား တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး လူပေါင်းလေးဆယ်နီးပါး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အထိ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။